Waxa ugu horeeya ee aad doonayso in aad qabato marka aad hesho telefoonka gacanta Internet-karti waa in ay online tagaan. Inta badan telefoonada Android ku siin xoogga Wi-Fi iyo qorshaha xogta 3G / 2G, si aad u sii heli karaa dhow ula xiriirto asxaabtaada iyo qoysaskooda. Browse bogiisa bulshada ama sii naftaada updated by reading news on shabaqa. Ama u tag Google Play in ay ku raaxeystaan ​​oo dhan kulan aad u jecel yahay oo muujinaya TV. Iyadoo in ka badan 750,000 oo barnaamijyadooda iyo ciyaaraha, malaayiin songs, kumanaan filimada iyo TV show, adduunka ee ururinta ugu weyn ee eBooks, iyo xulashada sii kordhaysa ee wargeysyada, aad haatan ka akhrisan kartaa, maqla oo daawado meel kasta oo aad rabto. Ama waxaad ka qabsan karaa daqiiqado gaar ah la sawiro weyn iyo videos, sahamin darbo oo ku online la wadaag saaxiibadaada. Macna ma laha wax kasta oo aad samayn la telefoonka aad Android, waxaa ku lug doonaa xusuusta, kaydinta iyo hawsha.
Qeybta 1: faraqa u dhexeeya Android Xasuusta, Android Kaydinta iyo Android Task Qeybta 2: Sida loo Hubi Status Memory on Android Phone Qeybta 3: Top 5 Manager Android Memory Apps Qeybta 4: Sida loo maamulo Manager Android Memory Apps hal meel
Ina keena aynu ka eegi kartaa noocyada kaydinta Android oo ay fahmaan farqiga u dhexeeya xasuusta Android, kaydinta Android oo Android hawsha.
Kaydinta ayaa Android uu leeyahay noocyo kala soo socda:
Read Memory oo keliya (ROM)
Kaydinta USB (SD kaydinta card)
1. Android Memory ama RAM
RAM waa nooc ka mid ah kaydinta xogta loo isticmaalaa in lagu qaban xogta. Waxaa loo isticmaalaa oo kaliya akhriska iyo wax qoridda inay u fayl-kaydinta. Ka fikir waxa ka mid ah sida golaha wasiirada weyn xereynta xajiya waxyaalaha diyaar u processor ee aad telefoon oo uu soo bandhigayaa in indhaha iyo dhegaha. Waa rewritable, si degdeg ah, iyo qaab jaban ee xasuusta, laakiin sidoo kale waa non upgradable. Sida caadiga ah telefoonka uu leeyahay 1or 2 GB RAM. Mid ah oo waxan nidaamka qalliinka isticmaali doonaa qayb ka mid ah in. Sidaas darteed, marnaba ma waxaad yeelan doontaa RAM dhameystiran diyaar u ah isticmaalka.
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee sababta Android smartphone dareemi kartaa daalid ma aha in processor aan la kor, waxa laga yaabaa sabab ah in aad si fudud u soo baxeen xusuus. Nidaamka Google Android ayaa caado ah in geeddi socodka socda ee asalka ah iyo - xitaa haddii ay aadan firfircoon - ilaa ay doofaar qaar ka mid ah xasuusta in qaali ah.
2. Android Kaydinta
Kaydinta Android waa kaydinta xogta meesha aad sii files oo dhan. Waxay sii joogo meeshoodii xataa haddii aad furmaan aad casriga ah. Waxay leedahay saddex nooc:
Kaydinta Gudaha: noocan ah lagu kaydiyo si joogto ah halkan ku lifaaqan si aad telefoon. Waxaad saari karin ama cusboonaynta kaydinta this. Kaydinta gudaha gaar ahaan waa muhiim, sababtoo ah waa meesha laga daadiyo aad ku kaydsan yihiin.
Kaydinta Phone: Waa qayb ka mid ah lagu kaydiyo gudaha inay guryahoodu oo dhan oo ka mid ah codsiyada pre-rakibay in la iman qalabka (Chine in aan qayb ka ahayn nidaamka qalliinka)
Kaydinta USB: Waa kaydinta laga saari halkaas oo waxaad ku hayn kartaa faylasha aad ka PC ama qalab kasta oo kale ee multimedia ay dhacdo in aad u soo baxay kaydinta gudaha. Waa sida kaydinta ah fideysa oo aad ka saari karto oo wuxuu dhigay qalab kale oo weli u arkaan waxyaabaha ku jira.
Sida ugu isticmaala Android, aad ordo galay xoogaa arrimaha bannaan marka ay timaado kaydinta gudaha diyaar u ah barnaamijyadooda. Shaqo adag aad la kulmi, ka dibna, waa in ay dhex maraan kasta oo Chine iyo garto dembiilayaasha waaweyn ee megabyte. Hal si oo taas looga qabto waa app lagu magacaabo DiskUsage. DiskUsage uu baaritaanku goobta iyo bandhigayaa wakiil muuqaal ah isticmaalka disk aad.
Furmo suuqa Tababaraha Task muujinaysaa barnaamijyadooda phone oo dhan ee hadda socda, oo ay la socdaan macluumaad ku saabsan Ciyaalle kasta oo wax ka mid ah, processor oo muujinaysa sida ay u badan processor waa wax gubaya, iyo wax RAM oo muujinaysa sida ay u badan kaydinta app ee degan. Waxaad si fudud looga qabto karaan hawsha maaraynta codsiyada lagu rakibay qalab aad. Waxaad u isticmaali kartaa in ay dilaan hawlaha waa la wada qabsanaya mar processor aad u badan ama xasuusta. Si kastaba ha ahaatee, nadiifinta xusuusta ay ku dhinteen oo dhan Chine waxaa si xoog leh laguma talinayo.
Hawlaha waxaa loo qoran karaa saddex qaybood: Active, Wax qabad la'aan iyo Gudaha.
Active: Shaqooyinkaasi waxaa dhab ahaan socda ku saabsan nidaamka. Waxa ay noqon kartaa shaashadda ama socda ee asalka ah (sida waardiye digital). Waxaad iyaga ku dili karaa in ay nadiifiso ka soo DHCP ama xasuusta.
Wax qabad la'aan: Shaqooyinkaasi waxaa ku kaydsan yihiin ee xasuusta laakiin aan la isticmaalayo khayraadka nidaamka la mid ah awoodda batariga. Ma jirto baahi in ay dili doonaan sidii aysan u soo bixin doonaa wixii isbedel ah.
Gudaha: hawlaha waa qayb ka mid ah nidaamka hawl gal. Waxaa loo firfircoonaan iyo furi si toos ah marka aad iska badasho on / off qalab aad. Si kastaba ha ahaatee, in ordaya hab, waa laguma talinayo in ay dili doonaan sida laga yaabaa in ay hoos u dhigi habka ama xataa waxaa shil.
Qeybta 2: Sida loo Hubi Status Memory on Android Phone
Hadda waxaad tahay cad oo ku saabsan waxa ay yihiin xasuusta Android iyo muhiimada ay leedahay ka soo reynaya sidii xasuusta. Si kastaba ha ahaatee, sida loo hubiyo oo lacag la'aan ah ilaa iyo xusuustaada? Si aad u hubiso xaaladda xusuusta aad telefoonka, RAAC TILMAAMAHAN:
Eeg faahfaahinta lagu kaydin jiray oo lagu kaydiyo gudaha.
Hoos wixii faahfaahin ah oo ku saabsan kaarka SD.
Tallaabooyinka lagu Free Up Memory
1. U dhaqaaq barnaamijyadooda ka gudaha kaarka SD. Si aad u soo guuraan Dalka Chine, RAAC TILMAAMAHAN:
a) U tag Settings.
b) Markaas ay tagaan codsiyada.
c) Markaas ay tagaan Maamul codsiyada
d) ka mid ah liiska ay doortaan app aad rabto in aad u guurto card SD.
e) Tubada dhaqaaq SD button card inuu u dhaqaaqo app. (Chine in laguu ogolaado in aad si ay u soo guuraan si ay kaarka SD oo keliya ayaa la dhaqaajin karin.)
2. dhaqaaji files warbaahinta oo dhan (music, videos, iwm) si ay kaarka SD dibadda.
3. uninstall app kasta oo ma aha in la isticmaalo. Si uninstall app:
a) u tag goobaha.
b) Dooro Codsiyada ka mid ah liiska.
c) Dooro app aad rabto in aad uninstall iyo tubbada button uninstall ah.
4. Dami wax widgets iyo wallpapers live si lacag la'aan ah ilaa iyo xusuusta.
Qeybta 3: Top 5 Android Memory Manager Apps
Tababare Auto Memory 4.4 / 5 Free
Xasuusta Manager 3.5 / 5 Free
Xasuusta Manager by JRummy Apps Inc 4.2 / 5 Free
Android Memory Tool Box 4.5 / 5 Lacag
1. Maareeyaha Auto Memory
Tababare Auto Memory kuu ogolaanaysaa inaad astaysto Tababaraha goobaha out-of-xusuusta aad casriga ah, si aadan u leeyihiin in ay u samayn naftaada. App waxay la shaqeysaa labada telefoonada xidid iyo unrooted. Tababare Auto Memory kor u siidaysay xusuusta reer qalab Android aad si toos ah. All inaad samayso waa in ay doortaan haddii aad rabto in xad gudubku, fudud ama Default maamulka xasuusta. Sida waxa aad sameyn la your computer, app this aad muujinayaa inta xusuusta aad sii daayay. Sida dilaaga hawl, waxa aad awoodi kartaa in ay dilaan ay barnaamijyadooda aan loo baahnayn. Waxaa fudud in Mudanayaasha, isticmaalka iyo ugu muhiimsan, waa wax ku ool ah.
Download Manager Auto Memory ka Google Play Store >>
Si fudud waxaad ka hubsan kartaa xasuusta terminal iyo aad u hesho maamulka app. Si aad u ogaato macluumaadka ku saabsan graphic, kaarka SD iyo xusuusta telefoonka, waxaad ka heli kartaa iyaga oo dhan ku xasuusta shaashadda. On screen maamulka codsi, waxaad dooran kartaa iyo uninstall barnaamijyadooda la mid tuubada. Waxaa jira saddex kaliya badhamada on app ah, sidaa darteed waa u fududahay in la isticmaalo.
Download Memory Manager ka Google Play Store >>
App waxa uu ku siinayaa xor u yahay inuu xakameeyo xasuusta telefoonka kaarka, SD iyo daruurta. Waxa aad maamuli kartaa oo gurmad labada xusuustaada hoose iyo daruur la mid app lacag la'aan ah. Waxaad si fudud u dhaqaaqi karaan faylasha ka kaadhka xusuusta si aad u dooratid adeegyada daruur iyo badbaadin on daruur ama ka daruurtii si toos ah iyaga ku badbaadin ah ee aad taleefan. Adeegyada Cloud oo la taageeray: DropBox, SkyDrive, Google Docs, SugarSync, Picasa, iyo Facebook. Waxa kale oo aad sameyn kartaa sirta ah haddii ay dhacdo in qof kasta oo kale in ay helaan aad videos iyo sawiro. Dhibaatada kaliya ee waa in aan laga yaabaa in la jaan qaada daydo qaar ka mid ah sida Google Nexus 4.
Download SanDisk Memory Zone ka Google Play Store >>
Tani Tababaraha xasuusta Android ay ka badan tahay qalab maamulka hawsha. Waxaa loo arki karaa version sare ee Android dhisay-in dilaaga hawsha. App Tani ma aha oo kaliya hagaajinaysaa waxqabadka guud ee telefoonka laakiin sidoo kale cimri dheeraada batteriga. Haddii aad rabto in aad la kulanto qaar ka mid ah sifooyinka sare, waxaad u leedahay in aad ka rujin telefoonka. Waxay leedahay laba hababka shaqeeya, tababaraha free Mini iyo tababare hawsha. Tababaraha Minifree waxaa inta badan loo isticmaalaa xasuusta gudaha halka tababare hawsha loo isticmaalaa soo reynaya Xasuus barnaamijyadooda aad. Waxa kale oo aad eegi kartaa xaaladda kasta app inuu go'aansado inuu dilo.
Tani waa tababare xasuusta app lacag. Tan waxaa la bixiyaa, waxa ay u muuqataa ka waxtar badan kuwa diyaar u ah oo lacag la'aan ah. Waxaad ka heli mid ka mid app oo dhan-in-ka mid ah muuqaalada sida Waxuun Xasuusta, Task loogu dhinto, Cache Nadiifiyayaasha, History Nadiifiyayaasha iyo qalab Memory falanqeeyo. Nadiifinta History macnaheedu ma aha oo kaliya taariikhda nadiif ah telefoonada, laakiin sidoo kale ushistory internet, suchch sida taariikhda raadinta Google iyo taariikhda YouTube. Oo shirkadda Grey Boy Tools ballan qaaday in ay soo celin lacagta haddii app uma shaqeeyo.
Download Android Memory Tool Box ka Google Play Store >>
Qeybta 4: Sida loo maamulo Manager Android Memory Apps in hal meel ah
Just heli aad jeceshahay Android Tababaraha memeory app? Hadda, waa in aad rabto in aad si ay u maareeyaan app ee wauy sahlan, sax? Halkan yimaado qalab dhan-in-hal dhinac saddexaad ah, oo la odhan jiray Wondereshare MobileGo for Android (Win) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waxaa aad u saamaxaaya in ay si fudud u samayn waxyaalaha soo socda.
Ku rakib, uninstall iyo mamager xasuusta dhoofinta ah ee Chine Android ku yaalla.
Download barnaamijyadooda managegment xasuusta Android ka Google Play iyo dukaan wax app aad ku daray in ay MobileGo ah. (La heli karo la Version Windows)
La wadaag ah barnaamijyadooda maamulka xasuusta Android ugu fiican la firends aad SMS, Twitter iyo Facebook.
Si toos ah u maamuli xasuusta Android iyo kaarka SD ka PC. (La heli karo la version Windows)
Bedelka Android Files via WiFi
Android Files dhaqaaq la Cable USB ah
> Resource > Android > Top 5 Android Memory Management Tool Si aad Memory ee Android